एक तिहाइ पुरुष र महिलाले पतिले पत्नीलाई पिट्‌नुलाई सामान्य मान्छन् । यस्तो सोचको विकास कसरी भयो होला ?
२७ फाल्गुन २०७६ मंगलबार
सिनेमा घरमा थप्पड चलिरहेको छ । तापसी पन्‍नु अभिनीत हिन्दी चलचित्रले दर्शकको चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ । पतिले पत्नीलाई हानेको एक थप्पडमा केन्द्रित चलचित्रमा पत्नीले लिएको अडानमा दर्शक वाहवाही गरिरहेका छन् ।
तर यथार्थ निकै फरक छ । एक अध्ययनमा एक तिहाइ पुरुष र महिलाले पतिले पत्नीलाई पिट्नु सामान्य मानेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले पहिलो पटक गरेको जेन्डर सोसल नर्म इन्डेक्सले यस्तो देखाएको हो ।
अध्ययनले करिब ९० प्रतिशत मानिसले महिलाप्रति पूर्वाग्रही धारणा राख्‍ने देखाएको छ । ७५ वटा देशमा गरिएको अध्ययनमा पुरुष र महिला दुवै महिलाप्रति पूर्वाग्रही धारणा राख्छन् भन्‍ने देखाएको छ । महिला र पुरुषबीचको विभेद कम हुँदै गए पनि ९१ प्रतिशत पुरुष र ८६ प्रतिशत महिलाले महिलाप्रति राजनीति, अर्थ, शिक्षा, हिंसा या प्रजनन अधिकारप्रति पक्षपाती विचार राख्छन् ।
इन्डेक्सले विश्व जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा आधाजति मानिसले पुरुष सर्वोच्च राजनीतिक नेता हुने र ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले पुरुष राम्रा व्यावसायिक कार्यकारी हुने धारणा राखेका छन् ।
एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक, विकसित, अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश भए पनि महिलाका सवालमा विश्वले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । द गार्जियनको अनलाइन संस्करणमा १० मानिसमा ९ जनाले महिलाप्रति पूर्वाग्रही धारणा राख्‍ने जनाइएको छ । आखिर किन महिलाप्रति व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्व नै यति पूर्वाग्रही र अनुत्तरदायी छ ?
विश्वमै अधिकांश देश पितृसत्तात्मक संस्थामा आधारित छन् । त्यही पितृसत्ताले दिएको दर्शनमा महिला र पुरुष सदियौँदेखि हुर्किंदै आएका छन् । पितृसत्ताले जहिले पनि पुरुषलाई नै सर्वोच्च ठान्यो । पुरुष सत्ताको यही विभेदको पर्दाफास गर्न फ्रान्सेली लेखक एवं अभियन्ता सिमोन दि बुभाएरले द सेकेन्ड सेक्स पुस्तक लेखेर विश्व हल्लाइन् ।
त्यो पुस्तक नारीवादको दोस्रो चरणमा मात्र आएको थियो । त्यसअघि बेलायती लेखक तथा प्रथम महिला उपन्यासकार जेन अस्टिनले उपन्यासमार्फत नारीवाद उठाइसकेकी थिइन् । प्राइड एन्ड प्रिजुडिसमा एलिजावेथको बौद्धिकता, सेन्स एन्ड सेन्सीबिलिटीमा एलिनरको चेतनालाई पुरुष पात्रमाझ बेजोड तरिकाले प्रस्तुत गरेकी थिइन्, उनले ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा अधिकांश मानिस हिन्दु धर्म मान्छन् । उपन्यासकार मदनमणि दीक्षितले महाभारतकालीन माधवीलाई प्रमुख पात्र बनाई माधवी उपन्यास लेखे । त्यसमा राजपुत्री माधवी गालब ऋषिभन्दा कैयौँ गुणा ज्ञानी र नैतिकवान् देखिन्छिन् । सोही उपन्यासमा उनले मातृसत्ताको समेत चित्रण गरेका छन् ।
नेपालमा दुर्गा, पार्वतीजस्ता देवीको पूजा, आराधना हुन्छ । भगवान् शिव एक भाग पुरुष र एक भाग महिला अर्थात् अद्र्धनारीश्वर मानिन्छन् । तर दुर्गा र पार्वतीको पूजा भए पनि महिलालाई पर सरेका बेला मन्दिर पस्नसमेत दिइँदैन । छाउपडीका नाममा अझै थुप्रै महिला गोठ, झुपडीमा बस्‍न बाध्य छन् । सहज तरिकाले बस्‍न पाए त हुन्थ्यो, अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
हुन त मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा महिलालाई दासभन्दा खासै माथिल्लो स्थान दिएको थिएन । प्राचीन ग्रीसमा महिलालाई नागरिकका रूपमा समेत हेरिँदैनथ्यो । नेपालमै पनि महिलाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भनी संविधानमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा फरक छ । हरेकपल्ट नागरिकता लिन महिलाले अदालत नै धाउनुपर्ने नजिर प्रशस्त छ ।
पुरुष सत्ताको यही व्यवहार देखेर सामाजिक सञ्जालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भनी नाम परिवर्तन गर्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ । महिलाले गर्ने हरेक कुरा, बिहान उठ्दादेखि राती सुत्दासम्मका सम्पूर्ण व्यवहार २४ सै घन्टा पुरुष र महिला–महिलाले निगरानी गरी यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्‍ने सूत्र जपिरहन्छन् । महिलालाई मान्छे नभई वस्तुजस्तो व्यवहार गरिरहन्छन्, जति नै नारी दिवस मनाए पनि इन्डेक्समा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।